Lahatsoratra ao amin'ny Ankapobeny - Namana Serasera.org
Lahatsoratra ao amin'ny Ankapobeny
13. Fampidirana sary amin'ny email
Manomboka izao dia afaka mampiditra sary amin'ny alalan'ny email ianao. Izany hoe alefanao email amin'ny adiresy manokana ny sary dia mitranga eto amin'ny serasera. Mba hahafahana manao izany dia mila… More>>
12. Torohevitra momba ny fifaneraserana
Mahafaly ahy ny manolotra ho anareo, indrindra ho an'ireo namana vaovao, torohevitra vitsivitsy mety hahatsara ny fampiasana ity namana serasera ity. - Fitadiavana namana : Raha tianareo hahomby ny fitadiavana… More>>
11. Ho serasera mivoatra hatrany
Maromaro ihany ny zava-baovao madinidinika natao tamin'iny volana febroary iny ka atolotra ho anareo amin'ity volana marsa ity. Ny vaovao hitako hoe mivaingana indrindra anefa dia ny fitsanganan'ny Fikaonandohan'ny… More>>
10. Rivo-baovaon'ny taona vaovao
Vaovao tokoa ny taona ka samy miandrandra rivo-baovao ny tsirairay. Isika eto amin'ny namana.serasera.org koa dia mifampirary soa samy hahazo izay tsara iriany amin'ity taona vaovao ity. Ho… More>>
9. Firariantsoa krismasy
Efa ho avy ity ny Krismasy 2009 sy ny Taombaovao 2010. Toy ny isantaona dia misy sary firariantsoa avy amintsika namana aseho ao amin'ny pejy fandraisana. Koa amin'ity taona ity dia toa izao no hanaovana… More>>
8. Eritreritra mandalo
Vao nampidirina eto amin'ny namana serasera indray ny atao hoe Eritreritra mandalo. Ny Eritreritra mandalo dia toerana hampidiranao izay zavatra mandalo ao an'eritreritrao ka tianao hozaraina amin'ny… More>>
7. Resaka mivantana
Raha vao mahita eo alohan'ny solonanaran'ny namana iray ianao dia azonao tsindrina io dia afaka miresaka mivantana ianareo. Ny namanao manokana dia mahita eo alohan'ny solonanaranao... More>>
6. Namana voasakana
Vita koa amin'izao ny lisitry ny namana voasakana. Raha toa misy namana tsy dia azoazonao dia azonao sakanana. Jereo eo amin'ny fanoroam-pejy ny Namana nisakana anao sy ny namana nosakananao.… More>>
5. Tsy te handray hafatra email?
Raha toa ianao ka tsy te handray hafatra email dia jereo ao amin'ny mombamomba anao misy hoe "Momba ny fahazoana email" dia tsindrio ilay hoe Ovay Rehefa ao ianao dia afaka misafidy hoe inona no handraisana… More>>
4. Tafiditra tsikelikely ny sary nisy hadisoana
Nisy fitarainana hoe nanjavona ny sary. Tsy nanjavona kay fa diso toerana fotsiny. Efa nampidirina tsikelikely izany ka efa tokony ho ao daholo. Raha mbola manana olana dia milazà More>>
3. Nalamina ny hevitra amin'ny sary
Nalamina kely ny hevitra ao amin'ny tahirintsary. Mirindra midina ny hevitra amin'izao. Izany hoe ny hevitra farany no ery ambany. Misy rohy hoe "Hevitra taloha" raha hijery ny hevitra taloha @ sary. More>>
2. Sary notsongaina
Ny sary mivoaka eo amin'ny sary notsongaina dia izay sary azon'ilay olona jerena ihany. Raha ohatra ka tsy mampiditra solonanarana ianao dia izay sary azon'ny rehetra jerena no mitranga. Raha mampiditra… More>>
1. Natomboka ny fanavaozana
Dia nosokafana ny 3 oktobra teo, nandritra ny fankalazana ny faha 10 taonan'ny serasera.org ny takelaka namana vaovao. Mbola misimisy ihany ny zavatra ahitsy fa dia sady manatsara ihany. Ireto avy ny… More>>